လက်ကားစက်ရုံမှ V အမျိုးအစား သံကြိုးလွှင့်ထူများကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးပါသည်။ASAKA
အရည်အသွေးမြင့် စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် 50T ပုလင်း Jack...
CE Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် လီဗာဘလောက်ကို အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း...
Lifting Height 10M ရှိသော အရည်အသွေးမြင့် Chain Block 2T
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်2တန် Webbing Sling အမြန်ပေးပို့ခြင်း။
CE Certificate ဖြင့် 0.8 တန် Lever Block ကို မြန်ဆန်စွာ ပို့ဆောင်ခြင်း။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် HHBB Electric Chain Hoist ကို အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ကွင်းဆက်လင့်ခ်
အရည်အသွေးမြင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးသိုင်းကြိုးများ
အရည်အသွေးမြင့် CE Standard Manual Chain Hoist
အရည်အသွေးမြင့် CE မှ ထောက်ခံထားသော Round Sling
CE ဖြင့် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး DH အမျိုးအစား Lever Block
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း CD1 TYEPE ELECTRIC WIRE ROPE HOIST
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ce လက်မှတ် HHBBelectric သံကြိုး hois
စက်ရုံမှ V အမျိုးအစား သံကြိုးကို အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးသော...
ce မှအတည်ပြုထားသော stainless stell ဝါယာကြိုးကြိုးကလစ်များ
China Aluminum Alloy Mini Chain H အတွက် အထူးဒီဇိုင်း
CE ထောက်ခံချက်ဖြင့် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း Girder Clamp
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် စက်ရုံမှ V အမျိုးအစား သံကြိုးလွှင့်စက်ကို တိုက်ရိုက်ပေးပါသည်။
HSZ-V Series Chain Block သည် လက်ဖြင့်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်ရုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှု၊ ဆိပ်ခံတံတားများ၊ သင်္ဘောကျင်းများနှင့် သိုလှောင်ရုံများတွင် စက်များကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ကုန်တင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးတွင် အလုပ်ရုတ်သိမ်းခြင်းအတွက် အကျိုးကျေးဇူးမရရှိနိုင်ပါ။
ကွင်းဆက်ဘလောက်ကို ခရီးသွားကွင်းဆက်တုံးအဖြစ် မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို တွန်းလှည်းဖြင့် တွဲသုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် monorail overhead conveying system၊hand journey crane နှင့် jib crane တို့အတွက် သင့်လျော်သည်။
1.ဤအမျိုးအစားသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး လက်ဆွဲကြိုးဖြင့် အလွယ်တကူ လည်ပတ်နိုင်သော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများနှင့် ပါဝါမရှိသည့်တိုင် လေဝင်လေထွက်ရှိ သေးငယ်သော ပစ္စည်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဆွဲဆန့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆွဲဆန့်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
2. The chain pulley blockis ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြု၍ အနည်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် လည်ပတ်ရာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊
3. ၎င်းသည် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသေးစား လက်ဆွဲကိရိယာဖြစ်သည်။
4. ၎င်းသည် ပေါ့ပါးပြီး သေးငယ်သော လက်ကိုင်လှေကား၏ အရွယ်အစားနှင့်အတူ ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ရှိသည်။
မော်ဒယ် HSZ-0.5V HSZ-1V HSZ-1.5V HSZ-2VS HSZ-2VD HSZ-3V HSZ-5V HSZ-10V HSZ-20V HSZ-30V
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်(T) ၀.၅ 1 ၁.၅2235 10 20 30
ပုံမှန်ဓာတ်လှေကား(မီတာ) ၂.၅ ၂.၅ ၂.၅ ၂.၅ ၂.၅3333 3
စမ်းသပ်ဝန်(T) ၀.၇၅ ၁.၅ ၂.၂၅33 ၄.၅ ၇.၅ ၁၂.၅ 25 ၃၇.၅
စွမ်းဆောင်ရည်(N) တွင် လိုအပ်သော ကြိုးပမ်းမှုများ ၂၆၂ ၃၂၄ ၃၉၅ ၃၈၀ ၃၃၀ ၄၀၂ ၄၃၀ ၄၃၈ ၄၃၈ ၄၄၂
ဝန်ကွင်းဆက်အချင်း(mm)56 ၇.၁ 86၇.၁ 10 10 10 10
ဝန်ကြိုးများနံပါတ် 1 1 1 12224 8 12
အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်)7၁၀.၅ ၁၅.၅ ၁၈.၅ 16 23 39 69 ၁၅၅ ၂၃၇
ဓာတ်လှေကားတစ်မီတာလျှင် အပိုအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) ၁.၅ ၁.၈2၂.၄ ၂.၇ ၃.၂ ၅.၃ ၉.၈ ၁၉.၆ ၂၈.၃
ယခင်- Drum Clamp ရုတ်သိမ်းခြင်းအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု: တရုတ်လက်ကား China Hsz-V အမျိုးအစား Lever 5000kg-50000kg Lifting Manual Hoist CE Certification (HSZ-V) အရည်အသွေးမြင့် သံကြိုးတုံး
1.5 တန် Lever Hoist
Hand Operated Winch ၊
ratchets များကို ချည်နှောင်ပါ။
wire rope လက်ဆွဲ ratchet ကြိုးဆွဲစက်
2021 အရောင်းရဆုံး ကွင်းဆက်တုံး5တန် စျေးနှုန်း Manua...
2 တန် လက်ဆွဲစက် ratchet ကြိုးဆွဲစက် လက်ဆွဲ...
Australian Standard Bow Shackle High Strength G...
ရွှေ့ရန်အတွက် CE Certificate 5T ratchet ကြိုးများ
Drum Lifter/Drum Clamp with Lifting chain Oil D...
စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက် လီဗာတုံး5တန်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
1 တန် အတု ဖမ်းပြီး ဒရမ် ရုတ်သိမ်း ကုပ် ခြေထောက် နှစ်ချောင်း D...
CE ဖြင့် 2021hot ရောင်းမည် အလျားလိုက် Lifting Clamps ...
Floor Jack ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
ZHIXING စက်ယန္တရားသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သည့်...